Umdlavuza wekhanda we-pancreatic - izimpawu, izigaba, ukwelashwa > Izinkinga zesifo sikashukela
I-Prognosis nokuthi baphila kanjani nomdlavuza wekhanda we-pancreatic
Phakathi kwazo zonke izifo ze-oncological, umdlavuza we-pancreatic awuvamile kakhulu, kepha usendaweni yesine ekufeni kwabantu. Imvamisa, odokotela bahlangabezana nomdlavuza wekhanda le-pancreas, isimila kwezinye izingxenye zomzimba sejwayelekile. Umdlavuza we-pancreatic utholakala kalula kubantu besilisa, futhi amathuba amakhulu okuhlangana nalesi sifo kwenzeka ngemuva kweminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu. Emazingeni okuqala, i-oncology yekhanda le-pancreatic ayiveli, futhi kamuva izimpawu zingaba nephutha ngezibonakaliso zezinye izifo. Ngenxa yalesi sizathu, i-pathology imvamisa kutholakala ukuthi isezingeni lokugcina, lapho isiguli kufanele siphile izinyanga ezimbalwa.
Isimila ekhanda le-pancreas singangena ngaphakathi kwe-duodenum, amathumbu amakhulu nesisu. I-Metastasis yenzeka ekujuleni kwegazi nokugeleza kwe-lymph. Ama-tumors wesibili ahlasela izicubu zesibindi, amaphaphu, amathambo nama-lymph node. I-Oncopathology ye-pancreas enama-metastases wesibindi ivame ukutholakala kakhulu, ngakho-ke i-jaundice iyisibonakaliso esiyinhloko salesi sifo. Ukwenza ukuxilongwa, kuyadingeka ukwenza i-diagnostics ku-gastroenterology: i-tomography (MRI, PET ne-CT), i-ultrasound, i-biopsy, njll. Ukwelashwa kubekiwe kususelwa kubukhulu bemfundo kanye nasezingeni lokuthuthuka kwe-oncology. Amaphesenti angama-20 eziguli ezenziwa ukuhlinzwa, ezinye zinikezwa kuphela ukwelashwa okululazayo.
Okwamanje, kuphela izici ezicatshangelwe zaziwa.
Kungakhuphula ubungozi bomdlavuza wekhanda we-pancreatic:
Ukudla okungenampilo. Ukwanda kwenani lamafutha ezilwane kwimenyu kuholela ekunyuseni emzimbeni we-hormone efana ne-cholecystokinin. Ngenxa yalokho, i-cell hyperplasia ingahle ivele.
Ukubhema Ukwehlulwa komzimba yi-carcinogens kuholela ekwandeni kwezinga le-lipid, okucasulayo ukwanda kwezicubu ze-glandular zepancreas.
I-pancreatitis engapheli, ukuba khona kwama-cysts noma ama-benign tumors. Ngokuqina kokukhanda kwekhanda lokugcotshwa kwe-pancreatic, ubungozi bokulimala kwanoma yikuphi ukwakheka kwesimo se-benign luyanda.
I-Pathology ye-gallbladder. Ukuba khona kwesifo se-gallstone kumuntu, i-cholecystitis engapheli, kungaholela ekwakhekeni kwesimila somdlavuza.
Ukusebenzisa kabi utshwala. Kubantu abancike otshwaleni, ubungozi be-pancreatitis engapheli buphakeme kaningana, okuyisici esiyingozi.
Umdlavuza wekhanda we-pancreatic ungowesigaba se-polymorphic tumors malignant. Imvamisa, lesi sifo sithinta abesilisa, kanti iminyaka esezingeni eliphakathi lapho i-pathology itholakala cishe iyiminyaka engama-65. Ngaphandle kokuthi kubhekwe kakhulu endabeni yokuqubuka kwesikhambi esibuhlungu se-pancreas ekhishwa emithini, iziguli ezingama-99% ziyafa kungakapheli iminyaka emihlanu kutholakale lesi sifo. Kuwo wonke ama-tumic ayingozi, umdlavuza we-pancreatic, futhi ikakhulukazi ikhanda lawo, uthatha isikhundla seshumi ohlwini lwezifo ze-oncological, kuyilapho i-pathology ingeyesine ekufeni kwabantu.
Ngokuvamile, isitho esinjenge-pancreas sibaluleke kakhulu ekusebenzeni komuntu okujwayelekile. Umnyango we-exocrine womzimba ukhiqiza ama-enzyme wokugaya adingekayo ukuze kusebenze ukudla kwi-lipase ne-amylase, trypsin ne-chymotrypsin. Amaseli e-endocrine akhiqiza ama-hormone (i-glucagon, insulin, somatostatin) elawula i-carbohydrate metabolism. Ijusi le-pancreatic, elikhiqizwa yi-gland, lithunyelwa e-duodenum, lapho ngokuzayo kunenqubo yokutholwa kwezinto ezisebenza njengendawo yokugcina amandla omzimba wonke. Umsebenzi onjalo ohlangene ufana nesitshalo sangempela sejeneretha, noma kunjalo, lapho amanyikwe ethinteka ngumdlavuza, kuvela ukungasebenzi kahle okukhulu, ngemuva kwalokho isitho singabe sisakwazi ukusebenza kahle.
I-70% yamacala omdlavuza we-pancreatic avela ngqo ekhanda lalesi sitho, kuyilapho i-80% yeziguli itholakala i-adenocarcinoma. Isimila iyindawo enkudlwana ebhuqiwe enokuqukethwe kwelesi elimhlophe noma elikhanyayo, kwezinye izimo i-exophytic noma i-diffuse neoplasms iyabonakala ukuthi ivela emithanjeni nasezithanjeni zeglandular.
Ubunzima benkambo incike ekutheni imiphi iminyango ethintwa yisimila kanye nemastastases yayo. Ngakho-ke, lapho kuvimba i-duct ejwayelekile ye-bile (i-duct ehlanganisa iziteshi zesibindi namanyikwe), ukugeleza kwe-bile kungena emathunjini amancane kuyama, ngenxa yalokho kuqongelela gallbladder, ngaleyo ndlela kubangele i-jaundice evimbayo. Lapho ukwakheka okubi komthambo we-splenic kugcwele, i-spleen nakanjani ivele ikhuphuke, okucasulayo i-splenomegaly kanye ne-ascites (ukugcwala koketshezi emgodini we-peritoneal). Uma kwenzeka ukuhluma kwe-metastasis emathunjini amakhulu noma amancanyana, ukungena kwamathumbu kwenzeka.
Kunezigaba eziningana zokuthuthuka komdlavuza wekhanda we-pancreatic:
I-Zero ˗ okokuqala, lapho isimila sincane khona, futhi akukho metastases,
Esokuqala, ohlelweni lapho kunokukhuphuka kwe-neoplasm kuze kufike ku-2 cm, i-metastasis nayo ayikho, ngakho-ke, lapho kuxilongwa isifo se-pathology kulesi sigaba, i-prognosis yesiguli isasivumela,
Okwesibili, okwenzeka ngokulimala kwezingxenye zomdlavuza ezingomakhelwane, kepha ngaphandle kokungena kwe-metastasis ezithweni ezingomakhelwane, isiguli siyahlinzwa ngokuhlinzwa okwalandela i-chemotherapy, okuvumela ukwelula impilo yesiguli isikhathi esithe xaxa,
Isigaba sesithathu severe esinzima ngokwedlulele, lapho kuthinteka khona izinzwa nemithambo yegazi, i-metastases ivela ngamandla, ngenxa yokuthi ngisho nokungenelela kokuhlinzwa kungasebenzi, indawo eyinhloko yokwelashwa ichayekwa yimithi ye-chemotherapeutic ukunciphisa ubuhlungu.
Okwesine ˗ isigaba sokugcina, okuthi, ngeshwa, singasebenziseki ekwelashweni, ama-metastases athinta izindawo ezinkulu, ukungena kwama-lymph node nezinye, ngisho nezitho ezikude kakhulu, inqubo yokunxila komzimba okukhulu iqala, futhi konke odokotela abangakwenza kumane nje kunciphise isimo sesiguli .
Bangaki abaphila nalokhu?
Umbuzo uphikisana kakhulu, ngoba isikhathi sokuphila esimweni ngasinye sihlukile. Okokuqala, kuya esigabeni lapho kwatholakala khona i-pathology, ngoba yilesi sici esinquma usayizi wesimila nokwenziwa kwaso, ubungako bomonakalo kumasayithi asondelene, kanye nokuba khona noma ukungabikho kwe-metastases kwizitho eziseduze noma kude namanyikwe. Okubaluleke kakhulu yikhono lokuhlinzwa.
Njengomthetho, ama-neoplasms amancane akade asuswa ngesikhathi esifanele ngomuthi okhethekile wezidakamizwa anikeza amathuba amahle: 2-5% yeziguli ziphila ngaphezu kweminyaka engu-5. Kodwa-ke, zingu-10% kuphela ezigulini eziyi-100 ezifuna usizo lwezokwelapha ekuqaleni, iningi lomdlavuza wekhanda we-pancreatic litholakala ezigabeni ezi-3-4 zokukhula. Njengoba kunesimila esingasebenziseki esiye saqhakaza saba yizitho nezicubu zomakhelwane, isikhathi sokuphila sinqunywa iminyaka emithathu, kepha uma isiguli sinesimila esine-metastases ekude, ukuhlinzwa kuba yize, futhi isikhathi sokuphila ngeke sibe ngaphezu kwezinyanga eziyi-6-12. Ukwenqaba enkambweni ye-chemotherapy kuholela eqinisweni lokuthi lesi sikhathi esifushane sokuphila sincishiswa izinyanga ezimbalwa.
Naphezu kweqiniso lokuthi odokotela bengakayitholi ukhiye womdlavuza, kusetshenzwe yonke inqubo yokwelula impilo yesiguli, kanye nokwenza ngcono futhi kugcinwe isimo sakhe esijwayelekile, futhi lokhu kufaka phakathi:
Ukwelashwa ngemisebe kanye ne-chemotherapy,
Ukusetshenziswa kwama-painkiller and antidepressant,
I-stenting of ducts ukuze ususe ukuqina kwe-bile.
Ngaphezu kwalokho, iziguli zithola usizo lwengqondo nokunakekelwa okufanele.
Umdlavuza wekhanda lama-pancreas noma i-duodenal papilla enkulu?
I-duodenal papilla enkulu (BDS), noma, njengoba ibizwa ngenye indlela, i-Vater papilla, akuwona umnyango we-pancreatic. Mhlawumbe ababaningi abantu abazi ukuthi uyini nokuthi ukuphi ngempela.
I-Vater nipple itholakala engxenyeni engaphakathi ye-duodenum, iyi-duct emfushane lapho ujusi we-pancreatic ne-bile ungena khona amathumbu amancane. Ekupheleni kokuphakama kwayo kukhona i-sphincter yase-Oddi, omsebenzi wayo oyinhloko ukulawula ukuqoqwa kwama-enzyme ngokususelwa ekwakhekeni kokudla.
Ngenxa yokuthi i-duodenal papilla enkulu isondele kakhulu kumanyikwe, ama-pathologies akhula kuwo angahlanganiswa kalula nezifo zesinye isitho. Ngendlela, lokhu akugcini nje ngamanyikwe, ngoba eceleni kweVater papilla kukhona nesinye sezindlala.
Ama-neoplasms e-duodenal papilla enkulu kanye namanyikwe ayizinto ezihluke ngokuphelele, kepha ukungahambi kahle kwamathanga e-BDS kuvame ukudala ukuvuvukala kwamanyikwe kanye nokwakhiwa kwe-bile stasis, ngenxa yokuthi inqubo inqubo emibi yalesi sitho esingumakhelwane ingasebenza.
Izimpawu eziphambili zomdlavuza we-BDS yile:
Ukuphuzi kwesikhumba nokulunywa kwawo,
Ukuba khona kwegazi esihlalweni.
Akunakwenzeka ukuthola uhlobo lwesifo usebenzisa isithombe esisodwa sasemtholampilo, ikakhulu lapho kunzima kakhulu ukuthola ukuthi yini imbangela yokukhathazeka: i-pancreas noma i-BDS. Ngokuya ngezikhalazo zesiguli, udokotela angenza kuphela ukucatshangelwa, noma kunjalo, ekuxilongeni ngokuqondile, izifundo ezithile ziyadingeka: i-MRI noma i-CT, esophagogastroduodenoscopy, i-endoscopic retrograde cholangiopancreatography, futhi kwezinye izimo i-laparoscopy.
Ososayensi banamuhla banaka kakhulu ngesihloko sokuthuthukiswa komdlavuza, ucwaningo lwenziwa ngenhloso yokuqonda inqubo ye-pathology ebanga, kanye nokuthola izidakamizwa ezingamisa ngokuphelele ukuqhubeka kwale nqubo. Kodwa-ke, ngeshwa, izinkinobho zalezi puzzle azikatholakali. Kucatshangwa ukuthi izici ezifaka isandla ekusebenzeni kwezicubu ezinobungozi futhi, ikakhulukazi, umdlavuza wekhanda le-pancreatic zingaba:
Amaphutha kokudla okunempilo: ukusetshenziswa ngokweqile kokudla okunamafutha kakhulu futhi okunosawoti kakhulu, ukudla okubhemayo, i-marinade, ngokwesibonelo, kuyaziwa ukuthi ukudla okunamafutha kukhulisa ukukhiqizwa kwe-pancreosimine, kuholele ekutheni i-pancreatic hyperplasia,
Ukuhlukunyezwa kophuzo oludakayo, ngenxa yokuthi ingozi yokuthuthuka kwe-pathology iphindwe kabili,
Ukubhema, kuhambisana nokungena kwe-carcinogen njalo egazini, kukhulisa ukugcwala kwama-lipids egazini, futhi lokhu kungadala i-hyperplasia yezinhlaka zamangqamuzana epancreatic,
I-pancreatitis engalapheki ngokuqina kokuqunjelwa kokuvuvukala isebenzisa ukuguqulwa kwamaseli we-pancreatic futhi inesandla ekulimaleni kwayo okuqhubekayo,
Isifo sikashukela i-mellitus naso singadala i-hyperplasia ye-epithelium ye-ducts.
Umfutho omkhulu wokukhula komdlavuza wekhanda le-pancreatic ungasebenza njengezifo ezifana ne-pancreatitis eyingozi, i-cholecystitis, i-gastritis, ulcer esiswini, i-pathology yendlela yokuphapha. Lezi zifo zitholakala kanye nama-pancreatic neoplasms ku-90% wawo wonke amacala.
Izimo ezibikezela ukwakheka kwesimila ekhanda le-pancreatic nazo yilezi:
Ukuhlinzwa okwenziwe kuma-pancreas phambilini
Ukusetshenziswa isikhathi eside kwezidakamizwa ezithile
Sebenza ngokulimala okwandayo: ososayensi abayekeli eceleni ukuthi ukwakheka kwama-tumor ezinomdlavuza kungenzeka ngenxa yokuxhumana njalo namakhemikhali anobungozi kanye nomusi wawo.
Ngokuphathelene nokwakheka okubi, umuntu akufanele anciphise ukubekelwa ifa. Amakhansela, kufaka phakathi i-pancreas, maningi amathuba okuba kwenzeke kulabo bantu abanezihlobo zabo eziseduze ezihlaselwe yile ndlela yokugula.
Izimpawu Zomdlavuza Wekhanda Lepancreatic
Njengoba kushiwo ngenhla, ubuqili balesi sifo bubangelwa ukuthi ezigabeni zokuqala bungazivezi nganoma iyiphi indlela, isiguli sizizwa kahle futhi asisoli nokuthi inqubo enkulu ye-pathological iqhubeka emzimbeni wayo. Lapho ifika esiteji 3, kuvela izimpawu zokuqala ezethusayo, kepha ngalesi sikhathi isimila sesivele safinyelela kusayizi omkhulu, kanye nama-metastases athinta imithambo yegazi, ama-lymph node, kanye nezitho zomzimba ezingomakhelwane nezicubu.
Into yokuqala eqala ukukhathaza ˗ kubuhlungu bokuthiwa, ukwenziwa kwendawo okuvame ukuba yi-hypochondrium eyiyo, kepha-ke, izinhlungu zingabhinca: imisebe ingemuva elingaphansi, isiqubu sesisu, okungukuthi, kwesinye isikhathi kunzima kakhulu ukuqonda ukuthi uyini ngempela umthombo wokungakhululeki. Imvamisa, ukukhululeka okunjalo kuyanda ebusuku, naphakathi kokuthambekela. I-neoplasm eqhubekayo futhi ekhula njalo ngosayizi icindezela iziphetho zezinzwa, njengomphumela lapho kuvela khona isifo esinzima sobuhlungu. Lapho udla ukudla okunamafutha noma iziphuzo ezidakayo, imvelo ebuhlungu yezinhlungu ishintsha ibe bukhali futhi ibukhali.
Njengoba i-pancreas ingenye yezitho zokugaya, lapho kunesimila esivuthiwe kuyo, kwenzeka ukuphazamiseka kwesifo, okuvezwa lapho kwenzeka:
Isicanucanu nokuhlanza, okuvame ukuba nombala wekhofi ngenxa yokuba khona kwegazi kuyo,
Isifo sohudo noma ukuqunjelwa,
Ukugqekeza okuvama (ikakhulukazi ngephunga elibolile)
Ukusinda esiswini ngemuva kokudla.
Kanye nalokhu, isifiso sokudla siyancipha futhi nekhwalithi yesitulo iyaphazamiseka, lapho kuvela khona izinsalela zokudla okungatholwa noma ukungcoliswa kwegazi.
Esimweni esivamile sesiguli, kwenzeka izinguquko ezingezinhle: buthakathaka njalo buyezwakala, inkumbulo kanye nokunaka kakhulu ukunakwa, amandla okusebenza ancipha, ukulala kuyaphazamiseka. Kodwa-ke, isibonakaliso esiyinhloko senqubo ebulalayo ukunciphisa umzimba. I-Depletion, noma, ngokwesayensi, i-cachexia, iba ngenxa yokungasebenzi kahle kwenqubo yokufaka izakhamzimba, okuvela ngenxa yenani elanele lama-enzyme e-pancreatic emzimbeni.
Isimo somtholampilo siba sibi kakhulu ngomdlavuza wekhanda lesitho esingu-3-4. Ngokwengeziwe kulezi zimpawu ezingenhla, kuvela ezinye ezimbalwa:
Ukuba khona kwephunga eliyinqaba,
Ukuthuthukiswa kwe-jaundice evimbayo,
Ukwanda kosayizi wama-pancreas nesibindi, okusobala ngisho nange-palpation,
I-anemia, i-thrombocytopenia noma i-leukopenia eyenzeka lapho kuthinteka isimila somgogodla we-splenic vein.
Kwesinye isikhathi ikhanda elibi kakhulu kanye nokuxinana kwegazi kwemikhawulo engezansi, i-nosebleeds, tachycardia kungabhekwa. Isimo esibucayi ukuvela kokuphuma kwezibilini zamathumbu, ukushaya kwenhliziyo komgogodla noma amaphaphu, ama-ascites.
Umdlavuza we-pancreatic wekhanda uhlukaniswa ngokuya nge-TNM eyamukelwa emhlabeni jikelele, lapho ama-tumors ahlukaniswa ngaphansi kwegama ngalinye ngosayizi wawo (T), ngokubakhona kwe-metastases kuma-lymph node (N), nangokuba khona kwe-metastases kwizitho ezikude (M).
Ngokuya endaweni neoplasm, kukhona:
Inqubo ebabazekayo yomzimba wamanyikwe,
I-Tumor yekhanda le-pancreatic, esicabanga ngalo.
Njengoba wonke umdlavuza unemvelo ehlukile ye-morphological, kukhona okunye ukwahlukaniswa, okusekwe kumgomo we-histology. Ngokusho kwalezi zindlela, wonke ama-tumor ayingozi ekhanda le-pancreatic ahlukaniswe:
I-ductal adenocarcinoma, enamaseli we-duct,
I-Mucinous adenocarcinoma, eyenziwe ngamangqamuzana anokuqukethwe okuphezulu kokuqunjelwa kwe-mucin,
I-cystadenocarcinoma ebangelwa ukuncipha i-cyst.
Ngokwemvelo yokukhula, wonke ama-tumors ahlukaniswa aba yi-exophytic, ahumeke futhi anqande, futhi ngohlobo lwawo ˗ lube yi-anaplastic futhi aluhlaza.
I-pathology efana nomdlavuza we-pancreatic iqoshwe ku "International Classization of Diseases." Ekilasini elithi "Neoplasms" (C00-D48) kunesigaba esithi "Malignant neoplasms" (C00-C97) esinegatshana elikuyo “Malignant neoplasms of localizations fulani” (C00-C75). Kulesi sigcawu, kunesinye isigatshana esithi “Malignant neoplasms sohlelo lokugaya ukudla” (C15-C26), lapho kukhona khona izicubu zokulimaza kwepancreatic ngaphansi kwekhodi C25. I-C25.0 ˗ ukuqokwa kwe-alphanumeric yomdlavuza wekhanda we-pancreatic.
Lapho uqala ukuvakashela uchwepheshe ukuthola isizathu sangempela, kusobala, akunakwenzeka. Udokotela ufunda i-anamnesis, wenza ukuhlolwa kwangaphandle kwesiguli nge-palpation, bese-ke, ngokuya ngezikhalazo zesiguli, inquma uhlelo lokuhlolwa olunye njalo. Ukuxilongwa okunembile kungenziwa kuphela kusetshenziswa amasu weelebhu kanye nezinsimbi.
Ukuhlolwa kwegazi okujwayelekile ˗ kuyadingeka ukutadisha izinga lama-leukocytes nama-lymphocyte, amaplatelet kanye ne-ESR (ngomdlavuza we-pancreatic bavame ukuphakanyiswa), kanye ne-hemoglobin: i-anemia ingaba wubufakazi bokulimala,
Ukuhlolwa kwegazi ushukela: ngomdlavuza we-pancreatic, i-glucose ephezulu ivame ukubonwa,
Ukuhlolwa kwegazi kwe-biochemical for the resolution of bilirubin, diastase, transaminase (ast, alt), cholesterol namaprotheni: amanani aphezulu alezi zinkomba angakhombisa nomdlavuza we-pancreatic,
Igazi kumamaki wesimila,
I-Urinalysis ˗ ichazwe ukuthola imibala ye-bile kanye ne-urobilin,
Ukuhlaziywa kwezindunduma, ezidingekayo ekuhlolweni kwangaphandle kwekhwalithi yezindunduma: kumdlavuza we-pancreatic, ukwakheka kwezindunduma kune-heterogenible, kuqukethe izinsalela zokudla okungaphilisiwe kanye nethonsi lamafutha, ipulpiti ine-sheen enamafutha kanye nephunga elithile elonakalisayo.
Izindlela zokucwaninga izinsimbi zinikeza imininingwane enemininingwane eminingi:
I-MRPH (magnetic resonance pancreatography).
Ukufundwa kwama-pancreas ngalezi zindlela kunikeza imininingwane efanelekile ngosayizi nendawo i-neoplasm, isimo se-bile ne-pancreatic ducts, kanye nokuba khona kwe-metastases kwezinye izitho nezicubu.
Uma kukhona izindaba ezingacacisiwe, kusetshenziswa izindlela zokuhlasela, ezibandakanya:
I-ERCP (i-endoscopic retrograde cholangiopancreatography), umongo wale nqubo ukwethulwa kwe-catheter enesiteshi lapho i-Middle Mediar isondliwa nge-endoscope, lokhu kukuvumela ukuthi uthathe izithombe ze-x-ray futhi uthathe nesampula yezicubu ze-biopsy,
I-Laparoscopy ˗ yenziwa nge-incision encane odongeni olungaphandle lwe-peritoneum, lapho kufakwa khona ithambo elincanyana le-laparoscope, elixhunywe kwikhamera yevidiyo futhi ifakwe isibani se-xenon, igcwalisa isisu esiseduze ne-carbon dioxide, abahlinzayo badala isikhala futhi ngaleyo ndlela bakwazi ukufinyelela kokuhlinzwa.
Ukwelashwa komdlavuza wekhanda we-pancreatic
Ngemuva kokuxilongwa kwalesi sifo, ochwepheshe banqunywa ngamaqhinga amanye okwelashwa, ohlakeni lapho kungenziwa khona ukungenelela kokuhlinzwa, kanye ne-chemotherapy kanye ne-radiation therapy, izindlela ezibaluliwe zisetshenziswa ngokuhlanganiswa. Umphumela omkhulu kakhulu ungatholakala ngokuhlinzwa ngokuhlinzwa, lapho isimila sivezwa khona. Ama-tumor abuhlungu ekuqaleni kwesigaba sokukhula abhekana nokuvuselelwa kabusha kwe-pancreatoduodenal. Umnyombo wenqubo ukususa ikhanda le-pancreatic kanye namathumbu amancane, kulandele ukwakhiwa kabusha kwezicubu ze-bile nephephabhuku lesisu. Imikhumbi eseduze, ama-lymph node, ne-fiber nazo zingaphansi kokususwa.
Njengoba ubungozi bokuphindelela kwe-neoplasm ngemuva kokuhlinzwa seliphezulu kakhulu, isiguli sinqunywe izifundo ze-chemotherapy, isikhathi saso esinqunywa hhayi kuphela ngosayizi we-tumor ebonakalayo, kodwa futhi nangokuba khona noma ukungabikho kwe-metastases. I-Radiotherapy isetshenziswa lapho kwenziwa ukwakheka okulimazayo futhi lapho kutholakala ukuthi sekudlule isikhathi. Kulesi simo, ukuhlinzwa akusenakwenzeka. Noma kunjalo, kukhona okuphula umthetho, kufaka phakathi i-jaundice, i-cachexia, i-leukopenia kanye nezilonda zesisu.
Izindlela zokudla ezingemuva kokusebenza kanye nezindlela zokuthibela
Ukulandela ukudla okufanele ngemuva kokuhlinzwa kungenye yamaphuzu aphambili wesikhathi sokululama. Ngenxa yokudla, umsebenzi wezitho zokugaya ukudla usujwayelekile futhi nokugoma kuqiniswa kakhulu. Kumikhiqizo engavunyelwe ngokuphelele ukusetshenziswa, izazi zokudla zifaka:
I-Alcoholic and alcoholated,
Ukhukhamba kanye ukhukhamba,
Inyama enamafutha nenhlanzi
I-Confectionery namakhekhe amasha,
Ikhofi eqinile netiye.
Ukuze kungalimazi umzimba obuthakathaka, ukondliwa kusungulwa kancane kancane. Ezinsukwini zokuqala emva kokuhlinzwa, isiguli sivumelwa kuphela isobho lemifino ecubuziwe, okusanhlamvu okulamanzi okulungiselelwe amanzi, imikhiqizo yobisi enamaphesenti aphansi wamafutha, ukusikwa kwesigajana esivela enyameni enamanzi, amabhisikhethi nesinkwa esidala, kanye netiye elingafakwanga itiye. Ngemuva kwamaviki amabili, inqobo nje uma kungekho zinkinga, imifino ethosiwe, inhlanzi enamafutha amancane, ama-apula abhakisiwe alethwa ekudleni, kuyilapho konke ukudla kufanele kufakwe ngendlela efushwayo noma ecubuziwe.
Umgomo oyinhloko wokudla ukugcizelela kokudla okunama-kilojoule amancane, kanye nokudla okuqukethe inani elikhulu le-fiber yemvelaphi yezitshalo. Ngaphezu kwalokho, isiguli kufanele sikhohlwe ngokuphelele ukubhema nokuphuza ˗ le mikhuba emibi ingakhulisa kakhulu izinto.
Kungenzeka yini ukwelapha umdlavuza we-4th degree pancreatic
Isigaba sesine senqubo yokulimaza i-pancreatic isesokugcina. Ngalesi sikhathi, isimila sesivele sifinyelele osayizi abakhulu, futhi amaseli ayo ayaqhubeka nokuhlukana ngokungalawuleki, kepha ngesivinini esikhulu. Kulesi sigaba sokuthuthuka, umzimba unezinga elikhulu lokuthinteka yi-metastases, ebonwa ngisho nasezithweni ezikude nama-pancreas, ngokwesibonelo, ebuchosheni nasentanjeni yomgogodla.
Lesi sifo siba nolaka ngokwendalo, ngenxa yalokho isimo sesiguli siba sibi kakhulu. Izimpawu eziphambili zihlanganisa:
Ukudakwa okukhulu komzimba,
Isifo esibuhlungu sobuhlungu esenzeka ngenxa yomthelela wamaseli womdlavuza ekuphethweni kwezinzwa kwezitho nezicubu,
Ukuqongelwa kwamanzi afinyelela kumalitha angama-20 ugcino lwesisu,
Ukudangala okwenzeka ngenxa yokungasebenzi kahle kwendlela yamathumbu: ukukhiqizwa okunganele kwamajusi wokugaya ukudla kuholela ebunzimeni enqubweni yokugaya ukudla kanye nokumunyanisa ukudla,
Ukunwebeka kwe-Splenomegaly ˗ kungaphezu kuka-12 cm,
Ukwanda kwe-Hepatomegaly ˗ umthamo wesibindi, ohambisana nemizamo esebenzayo yomzimba yokulwa ukudakwa,
Ukuvuvukala kwama-lymph node ˗ kwenzeka kakhulu, ngoba lezi zindlela zenzelwe ukuhlanza i-lymph, lapho amaseli womdlavuza asakazeka khona,
I-Thrombophlebitis, ekhula ngenxa yokulimazeka kwegazi.
Injongo yokwelashwa kulesi sigaba ukuthuthukisa isimo esigcwele sesiguli, kanye nokuvikela ukukhula okusebenzayo kwe-tumor kanye ne-metastases. Ukuze wenze lokhu:
Ukusetshenziselwa okugcwele noma okuyingxenye kwama-pancreas nezindawo ezizungezile,
Ukuhlinzwa okuhlinzayo okusiza ukubuyisa ukuvinjezelwa kwamathumbu kanye ne-bile duct futhi kuqede ingozi yokopha,
I-Chemotherapy (iGemzar, iCampto, iCarboplatin, njll.),
Ukwelashwa ngemisebe kusetshenziswa i-ionizing radiation, le ndlela inomphumela omubi kumamolekyuli wamaprotheni kumaseli ayingozi, ngenxa yalokho i-neoplasm incipha ngosayizi,
Ukwelapha okubulala izinzwa, inhloso enkulu yazo ukunciphisa izinhlungu, ngoba lokhu, ama-analgesics ngisho nezinto ze-narcotic asetshenziswa.
Isilinganiso sokuphila kwasesiteji sesi-4 se-pancreatic sinqunywa yizici eziningi: imingcele yokwakheka, inani le-metastases, izinga lokudakwa, impendulo yomzimba ku-chemotherapy, kanye nempumelelo ephelele noma ukwehluleka ukwelashwa. Okubaluleke kakhulu isimo sengqondo sesiguli: kulula kakhulu ukumelana nalesi sifo kubantu abagcina imimoya emihle nethemba.
Ngandlela thile, isiphetho sezinqubo ezimbi kakhulu asisibi. I-4-5% ˗ le ibanga lifaka iziguli ezisinda isikhathi esingaphezu konyaka ngemuva kokuxilongwa umdlavuza we-pancreatic esiteji sokugcina. Ngokwesilinganiso, isikhathi sokuphila salezi ziguli sisuka ezinyangeni ezi-1 kuye kwezingu-6.
Izindlela zokwelapha ezingejwayelekile
Umdlavuza we-pancreatic yisifo esibi kakhulu, ukwelashwa kwakho kudinga indlela ehlanganisiwe. Ukuhlinzwa, kuhlanganiswa nezifundo zamakhemikhali, kungandisa impilo yesiguli futhi kuthuthukise impilo yakhe ejwayelekile. Iziguli ezifuna okungenani ngandlela thile ukuzisiza zilungele ukuzama izindlela ezingezona ezejwayelekile, ngokwesibonelo, ukwelashwa ngokulandela izindlela zokupheka zemithi yendabuko. Akufanele zikhethwe njengezindlela zokwelapha eziyinhloko, ngoba umdlavuza unolaka kakhulu, futhi kudingeka izindlela eziningi zokuvimbela le nqubo. Kodwa-ke, njengesilinganiso esingeziwe, ukusebenzisa izithako zamakhambi kuyinto eyamukelekayo, into esemqoka ukubonana nodokotela oncologist ngaphambi kokuqala ukwelashwa ekhaya.
Kubandakanya ukusetshenziswa kwe-vodka ne-oyela yemifino. Isakhi ngasinye kufanele sithathwe ngevolumu engama-30 ml. Ngemuva kokuhlanganisa izinto, le ngxube idinga ukuthululelwa embizeni, uyivale kahle bese uyixhawula kahle. Kunconywa ukusebenzisa umkhiqizo otholwe amahlandla ama-3 ngosuku imizuzu eyi-15 ngaphambi kokudla, kuyilapho kugcinwa isikhathi esilinganayo samahora ayisithupha phakathi kokudla. Inkambo yokwelashwa kufanele okungenani izinsuku eziyi-10, lapho-ke kufanele iphazanyiswe izinsuku ezingama-5, bese iphinda usuku lwezinsuku eziyishumi. inkambo yokuphumula yezinsuku ezinhlanu. Ekupheleni kwenkambo yesibili, umzimba udinga ukunikezwa ukuphumula okuncane, ngakho-ke kunconywa ukuthi uyeke ukuthatha ingxube amaviki ama-2. Isikimu esifanayo kufanele silandelwe iminyaka eminingana. Ngokusho kokunye ukubuyekeza, ukuthuthukiswa kwempilo kuqashelwa ngemuva kwezinyanga ezimbalwa, noma kunjalo, isikhathi esincane sokwelashwa okunjalo kufanele okungenani sibe yizinyanga eziyi-8 ˗ ngalesi sikhathi, izimila ezinosayizi omncane zingasombulula. Kukhona ama-contraindication: abantu abahlushwa i-pancreatitis engapheli abakwazi ukwelashwa ngale ndlela.
Kusho ukusetshenziswa kwama-tinctures we-Aconite Dzhungarsky, ithonsi elilodwa lawo okumele lihlanjululwe engilazini yamanzi ahlanzekile. Nsuku zonke, umthamo kufanele unyuswe ngethonsi elilodwa, ngakho-ke umthamo wento esetshenzisiwe izofinyelela amathonsi angama-30 lapho kuphela inyanga. Lapho-ke umthamo kufanele wehliswe ngokulandelana okuphindayo. Isiphuzo esinjalo sinconywa ukusebenzisa izikhathi ezi-3 ngosuku imizuzu engama-40 ngaphambi kokudla. Kodwa-ke, ukwelashwa ngokuya ngendlela ka-Alefirova akupheli lapho. Isigamu sehora ngemuva kokudla, kufanele uphuze i-decoction yamakhambi alandelayo:
I-calamu izimpande, imbewu ye-dill nezimbali ze-calendula (engxenyeni yokuqala),
Izimpande ze-iris ziqhakaze ngokuqhakaza, impande ye-cinquefoil kanye noxhaxha lwe-hop ejwayelekile (izingxenye ezi-2 ngazinye),
Umuthi wemithi (izingxenye ezi-3).
I-10 g yaleli qoqo kumele igcwaliswe ngamanzi abilayo angama-250 ml, emva kwalokho uketshezi kufanele futhi lugcinwe kubhavini lwamanzi imizuzu engama-20. Kumhluzi opholile futhi omthe mpo, kufakwa i-1.5 ml ye-tincture yekhanda elikhulu. Kunconywa ukuthatha umkhiqizo owutholwe imizuzu engama-20 ngaphambi kokudla kwama-30 ml izikhathi ezi-3 ngosuku izinyanga ezimbili.
I-Chemotherapy yomdlavuza we-pancreatic
Ukuchayeka kwesimila somdlavuza esinemithi enobuthi ˗ lena yi-chemotherapy. Umgomo wayo uwukubhubhisa amangqamuzana amabi futhi kwehlise izinga lokukhula kwezimila. Kodwa-ke, le mishanguzo inomphumela olimazayo kumaseli anempilo, kepha ngokwezinga elincane kakhulu: izakhi zeseli ezingavunyelwe ezinomdlavuza, ezithinteka kakhulu ubuthi. Umthamo wento yomuthi ukhethwa ngokuqinile ˗ lokhu kuyadingeka ukuze ukwakheka okulimazayo kuwele ngaphansi kwethonya elikhulu, ngenkathi umzimba uthola umonakalo omncane.
Ukunwetshwa kwempilo kwezinyanga eziyi-6-9 ngokwesilinganiso,
Ukwenza ngcono isimo sesiguli: ukuncishiswa kobuhlungu, ngenxa yokuthi isidingo sokusetshenziswa kwezidakamizwa ze-narcotic kanye ne-analgesics sincishiswa cishe ngu-50%,
Ama-Chemotherapeutic agents aguqula iDNA yamaseli amlimazayo, okungukuthi, athinta imininingwane edingekayo inqubo yokuhlukanisa. Nge-DNA ebhujisiwe, amangqamuzana omdlavuza awakwazi ukuzala futhi ngokushesha ayafa, ngenxa yalokho ukuthuthukiswa kwe-neoplasm kuyeka nokuncipha kwawo okulandelayo. Njengoba iseli elinobungozi lithinta kakhulu phakathi nesikhathi sokuhlukaniswa kwaso, i-chemotherapy yenziwa lapho isondela esigabeni sokuzala kwayo. Ngakho-ke irejimeni yokwelashwa, eyenziwa yizifundo.
Ezokwelapha, kuhle ukuhlukanisa phakathi kwezinhlobo ezi-2 ze-chemotherapy:
I-Monochemotherapy ˗ isebenzisa noma yisiphi isidakamizwa esisodwa,
I-Polychemotherapy ˗ isebenzisa umuthi owodwa noma ngaphezulu obandakanyeka kwinqubo yokwelashwa ngenye indlela noma ngokufana.
Njengoba izinto ezinobuthi zingathinti amangqamuzana angajwayelekile nje kuphela, kodwa nezicubu ezinempilo nezitho zomzimba, iziguli zivame ukuzwa imiphumela engathandeki ngendlela yesifo sohudo, isicanucanu kanye nokuhlanza, ukulahlekelwa izinwele, kanye ne-hematopoiesis.
Izidakamizwa eziphambili ze-chemotherapeutic ezisetshenziswa kwezokwelapha zibandakanya:
I- "Docetaxel" ˗ inciphisa ukuqubuka kwesifo ngamaphesenti angama-20 futhi ithuthukise nesimo jikelele sesiguli,
I- "Gemcitabine" ˗ nayo isetshenziswa njenge-monochemotherapy, yehlisa ivolumu yesisu kanye nenombolo ye-metastases ngo-10%,
I- "Cisplatin" ne "Fluorouracil" ˗ inhlanganisela evumela kwezinye izimo ukwandisa isikhathi sokuphila kuze kube yizinyanga eziyi-12 - 12,
I- "Fluorouracil" ne "Gemcitabine" mhlawumbe ziyinhlanganisela ephumelela kakhulu esiza impilo ende kuze kube unyaka noma ngaphezulu.
Kudingeka nini ukuhlinzwa?
Njengomthetho, ukuhlinzwa kuyadingeka ngokushesha ezigabeni zokuqala zokukhula kokulimala. Isigaxa somdlavuza esikulesi sigaba asibalulekile, futhi ama-metastases ngokuvamile awekho, ngakho-ke, ukuvimbela ukukhula komdlavuza kanye nokusakazeka kwamaseli womdlavuza emzimbeni wonke, isiguli siyahlinzwa.
Kunezinhlobo eziningi zokuhlinzwa okuhlinzwa, okukodwa okhethwe kuzo ngudokotela kuvumelana nesiguli: ukubekelwa imingcele, ukwakheka komlando, ukuba khona noma ukungabikho kwe-metastases, izinkinga kanye nezifo ezingamahlalakhona kuyabhekwa.
Umsebenzi wokuhlola, ongabizwa ngokuthi yi-diagnostic ˗ wenziwa ngenhloso yokucacisa ukutholakala kwezifo, lapho izifundo ezinomsizi ngesizathu esithile zinganikanga imininingwane ephelele nge-pathology.
Ukususwa kabusha kwe-Ricalical ˗ ukususwa ngokuphelele kwe-tumor enomdlavuza, ebaluleke kakhulu ekuqaleni kwesigaba sokusungulwa kwayo,
Ukusebenza okubandayo kwenziwa ngezindlela ezimbili:
Ukususa ngokwengxenye ukwakheka okulimazayo uma kungenakwenzeka ukukususa ngokuphelele,
Ukuqedwa kwezinkinga (ukuvinjwa kwamathumbu, ukunciphisa i-bile duct), kanye nokususwa kwama-metastases akwezinye izitho zomzimba.
Ukuphinda kwenziwe okwenziwe ngendlela enobunzima, kunezinhlobo eziningi.
Ukususwa ngokuphelele kwama-pancreas ˗ kwenziwa ngesimila esibanzi, esithinta zonke izingxenye zomzimba. Uma kungekho pancreas, isiguli sinqunyelwe amalungiselelo aqukethe i-enzyme, inhloso yawo ukuguqula inqubo yokugaya ukudla ibejwayelekile.
I-distal pancreatic resection ˗ ibalulekile uma isimila sithinta umsila kanye nomzimba. Ngale hlobo lokuhlinzwa, inhloko kuphela yamanyikwe ngeke isuswe.
Ukuhlelwa kabusha kwesigaba se-pancreas ˗ kuhambisana nokususwa kwengxenye yamapancreas nokuthambisa imbobo yamathumbu emsileni nasekhanda lama-pancreas, okudingekayo ukubuyisela ukuphuma kwejusi le-pancreatic.
Ukusebenza kwe-Will ˗ kusetshenziselwa izilonda ezinesihlungu ezenziwe endaweni ekhanda le-pancreatic. Lo mnyango wesitho utholakala kabusha, futhi ngawo amathumbu amancane, isigaxa senyongo, izingxenye ze-pylorus yesisu ne-bile ducts, kanye ne-lymph node yesifunda. Le ndlela inciphisa kakhulu ubungozi bokuphindelela.
Indlela ye-cryogenic, umongo wayo ngumphumela wamaseli womdlavuza emazingeni okushisa aphansi, obangela ukubhujiswa kwabo okulandelayo. Le ndlela ibhekwa njengephephe kakhulu, ngoba ayikukhuthazi ukuthuthukiswa kwezinkinga, futhi ngaphezu kwalokho inomphumela we-analgesic.
Ngemuva kwanoma yiluphi uhlobo lokuhlinzwa, inkambo yokwelashwa kwe-chemo- ne-radiation iyenziwa ˗ lokhu kuyadingeka ukuhlanganisa umphumela owatholakala ngokuhlinzwa.
I-Pancreatic Cancer Anesthesia
Ukusetshenziswa kwemithi yezinhlungu yokulimala kwe-pancreatic kungenye yezinto eziphambili zenqubo yokwelashwa. Kunesikimu esamukelwa ngokujwayelekile, okukhona kuzo ukuqokwa kwama-analgesics eziguli ezinomdlavuza we-pancreatic.
Esigabeni sokuqala sesifundo se-pathology, i-syndrome yezinhlungu ayikhulunywa, ngakho-ke asikho isidingo sokusebenzisa izidakamizwa ze-narcotic. Ama-analgesics anqunyelwe isiguli: I-Paracetamol kwifomu lethebhulethi (500 mg njalo ngamahora ama-5) kanye no-Analgin, aphathwe ngokungaxhunyiwe emzimbeni noma ngezikhathi ezithile kabili ngosuku.
Esigabeni sesibili, ama-analgesics angewona ama-narcotic awaphumeleli, ngakho-ke, kusetshenziswa ama-opioid alandelayo: I-Promedol (25 mg njalo emahoreni ayi-6), iTramadol (50-100 mg njalo emahoreni angama-5-6), kanye neDihydrocodeine (amahora angama-60 njalo ngamahora ayi-12) -100 mg).
Isigaba sokugcina siyaqhubeka, njengomthetho, sisebenzisa ama-opiates aqinile. Isibonelo esikhanyayo i-Fentanyl, ephathwa nge-intramuscularly noma nge-droppers, lesi sidakamizwa sinamandla kune-morphine, kepha umphumela waso uhlala isikhashana. I-Fentanyl iyatholakala futhi ngesimo sesichibi, umphumela we-analgesic oqhubeka ufike emahoreni angama-72. Omunye umuthi ojwayelekile waleli qembu yi-Prosidol, yithebulethi yokutholwa kabusha noma isisombululo somjovo. Umthamo wansuku zonke wezinto akufanele udlule i-200 mg, kwezinye izimo, i-Prosidol ingaba umlutha.
Umbuzo wesidingo sama-painkillers unqunywa kuphela ngudokotela: akagcini ngokuchaza umuthi othize, kodwa futhi ubala umthamo wawo ofanele wesiguli ngamunye. Iziguli ezihlushwa isimila somdlavuza, futhi ikakhulukazi, umdlavuza we-pancreatic, zinelungelo lokuthenga izidakamizwa ngesaphulelo sika-50% noma ukuzithola mahhala. Bonke abakwa-narcotic painkiller bahlakazwa ngokuqinile ngokuya ngommiselo, okuqinisekiswe ngophawu lwesikhungo sezokwelapha nodokotela owelaphayo.
Akunakwenzeka ukusho ngokuqinisekile ukuthi bangakanani abantu abaphila ngemuva kokuthola umdlavuza we-pancreatic, ngoba konke kuncike ecaleni ngalinye.
Ngokwezibalo, ama-50% eziguli ezithole ngesifo sazo esigabeni sesi-2 sokukhula kwazo zihlala iminyaka engaba mi-5, ngokulimala kwezifo zepancreatic ze-3 kanye ne-4th degree, ukusinda akusekho ngaphezu kwezinyanga eziyi-6 kuya kwezi-12. Ukungenelela kokuhlinzwa kubalulekile ekwelashweni komdlavuza we-pancreatic, kepha njengoba isimila esinganakiwe sesivele singasebenzi, isikhathi sokuphila sesiguli sincishiswa kakhulu. Imvamisa, esimweni esinjalo, kusetshenziswa ukwelashwa okulusizi, ngenxa yokuthi kukhonjiswa kuphela ukubonakaliswa kwe-pathology, hhayi yena uqobo.
Ukwelapha ukwelashwa kungathola imiphumela emihle kuphela uma i-neoplasm ibonwe kusenesikhathi ekuqaleni, noma kunjalo, ngesizathu esilula sokuthi umdlavuza we-pancreatic uphelele ngokuphelele ekuqaleni, isiguli asisoli ngisho ne-pathology emzimbeni wakhe, futhi ngenxa yalokho sifuna ukwelashwa siza lapho sekwedlule isikhathi.
Umdlavuza we-pancreatic - izigaba, izimpawu zokuqala nokubonakaliswa, ukwelashwa
Iqiniso lokuthi umdlavuza ungomunye wemithi emibi kakhulu, ngokuvamile engelapheki, liyaziwa kwabaningi. Kodwa-ke, ngisho nokwelashwa okufika ngesikhathi akuhlali kuqinisekiswa ukwelashwa okuphelele. Kuyiqiniso, umdlavuza yisifo esinamandla, kanti umdlavuza wepancreatic ubonwa njengenye ye-oncological pathologies ebulala kakhulu.
Kukhula, njengomthetho, emva kweminyaka yobudala engama-70 (ngaphezu kwama-60% kweziguli), ngaphezu kwalokho, emadodeni izikhathi eziphindwe izikhathi eziyi-1.5. Phakathi kwezifo ezaziwayo ze-oncological, umdlavuza we-pancreatic ukude nefomu elivame kakhulu, imvamisa yakhona ayidluli ngaphezulu kwe-2-3% yesehlakalo esiphelele, noma kunjalo, ngenxa yokuxilongwa kwesifo sekwephuzile, iningi lamacala alikwazi ukusindiswa.
Ukuzulazula kwekhasi okusheshayo
Umdlavuza we-pancreatic ukuwohloka kwamaseli we-pancreatic ku-malignant, kulandelwa ukuphindaphindeka kwawo nokwakhiwa kwesimila. Ngokuya ngezakhiwo ezilimele, izinhlobo ezahlukene ze-oncopathologies ziyakhula, ziyahlukahluka ngejubane lokusakazeka nezimpawu.
Ama-pancreas awakwazi ukukhiqiza kuphela ama-enzyme wokugaya, kodwa futhi ahlanganise ama-hormone. Amaseli we-glandular abhekene nokukhiqiza ijusi le-pancreatic atholakala endaweni eyandisiwe engaphandle yesitho esibizwa ikhanda.
Ukwakheka kwama-hormone kwenzeka ngamaqoqo amaseli abizwa ngokuthi ama-islets of Langerhans. Zitholakala ikakhulukazi emuva kwamanyikwe - umsila. Ama-hormone aphambili angokulandelayo:
i-gastrin, evuselela ukukhiqizwa kwejusi lesisu,
glucagon, inhloso yawo ukwandisa ushukela wegazi,
i-insulin - ikhulisa umsebenzi we-glucose metabolism, inciphisa ukugxila kwayo egazini.
Phakathi kwekhanda nomsila kukhona indawo ebizwa ngokuthi umzimba. Ngokwezibalo, umdlavuza wekhanda wepancreatic uvame ukukhula, kanti izilonda zezinye izingxenye zivame kakhulu.
Uma i-oncogenesis yamaseli ama-islets ama-Langerhans kwenzeka, umsebenzi we-endocrine wesitho uyahlupheka. Kulesi simo, kuqubuka isimila se-gastrinomas, glucagonomas, insulinomas.
Ukwehlulwa kwezinto ezihlelekile ezihlanganisa izindunduma kubizwa ngokuthi yi-squamous cell carcinoma yamanyikwe. Lapho amaseli e-glandular ebhekana ne-oncotransformation, kutholakala i-adenocarcinoma. Futhi i-glandular squamous cell carcinoma ye-pancreas iyindlela exubile lapho kuthinteka khona zombili amayunithi akhiqiza i-enzyme namaseli emigodi ye-excucory ducts.
Ngaphezu kwalokho, ama-cysts kuma-pancreas angaba yisilonda. Kulokhu, ama-cell cell adenocarcinomas nama-mucinous cystadenocarcinomas akhula. Lapho amaseli azalwe kabusha ahlelwe ngendlela yamaqoqo, akhuluma ngomdlavuza we-acinar.
Kodwa-ke, okuyingozi kakhulu uhlobo olungenamikhawulo lomdlavuza we-pancreatic. Uthuthuka ngokushesha kunabanye futhi uthambekele kakhulu kuma-metastasis.
Kodwa-ke, zonke izinhlobo zomdlavuza we-pancreatic zinobungozi obukhulu. Akudlule iminyaka eminingana ukusuka ekuqaleni kokuqala kwesifo kuya ekushintsheni kuya esigabeni esibulalayo, njengoba kwenzeka kwamanye ama-oncopathologies, kodwa izinyanga ezingama-6-8 kuphela.
Ngeshwa, akukhonjwanga ngokucacile ukuthi yini ngempela ebangela umdlavuza we-pancreatic - kukholelwa ukuthi lezi zigaba ezilandelayo zabantu ziwela eqenjini eliyingozi:
Abesilisa abangaphezu kweminyaka engama-60
labo abanomlando wezifo ze-gallbladder, isibindi, isilonda sesisu, i-mellitus yesifo sikashukela,
abantu abanezifo ezithathelwanayo zomgogodla womlomo (pulpitis, periodontitis),
iziguli ezisebenzela izilonda zesisu,
abantu abanezifo ezinamandla: ama-cysts, i-pancreatitis engapheli, i-ulcerative colitis, isifo sikaCrohn,
abantu abanefa lesisindo somdlavuza wepancreatic.
Izingozi zasemsebenzini nazo zidlala indima ebalulekile: ukuthintana okuhleliwe ne-asbestos, udayi kokufakwa kwezinsimbi. Kuyafakazelwa ukuthi ubungozi bomdlavuza we-pancreatic ukhulisa kakhulu ukudla okungalungile nge-predominance yokudla okunamafutha nenani elikhulu le-kuthosa.
Inyama engaba yingozi, eyosiwe, amasoseji, inyama ebhemayo, ubhekeni. Ama-pancreas nawo ahlushwa ukudla okuphezulu okunoshukela, ama-carbohydrate alula, iziphuzo ezinekhabhoni.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi noma iyiphi inqubo engapheli yokulimala ikhulisa kakhulu amathuba umdlavuza weseli. Kwenzeka okufanayo kuma-pancreas, kanti umdlavuza okuwo ungakhula uphikisana nesizinda sokuvuvukala ezinhlakeni ze-anatomical eziseduzane, lesi sitho esihambisana naso kakhulu:
Kuyamangaza iqiniso lokuthi izinqubo ezinobungozi emzimbeni okukhulunywa ngazo zine "izintandokazi" zohlanga. Ngakho-ke, umdlavuza wamanyikwe usengozini enkulu kuma-Afrika.
Umdlavuza wepancreatic awusilo ize obizwa ngokuthi “umbulali othuleyo” - izimpawu zawo zibonakala kuphela lapho isimila sikusigaba 3 noma 4. Esigabeni sokuqala somdlavuza, ukusebenza kwesitho akuphazamiseki, futhi isiguli asinazibonakaliso ezibalulekile.
Esigabeni sokuqala, isimila esinomdlavuza kumanyikwe asidluli ububanzi be-2 cm, asisakazeki ngaphandle komzimba, asikhuli ukungena emithanjeni.
Uma i-neoplasm yenziwa endaweni ekhanda lendlala, ingaqala ukushuba i-duodenum, ezovezwa ukuphazamiseka kwesitulo ngendlela yesifo sohudo kanye neseuse nausea. Ama-Oncologists aqoka isimo esichaziwe esikhundleni sika-1A. Isiteji 1B sibonakaliswa ukwanda kwesimila ngosayizi kufika ku-2 cm noma ngaphezulu ngokuqalwa kwaso ngisho nangaphakathi kwegland.
I-substage 2A isivele isho ukukhula kwe-neoplasm kwizitho zomakhelwane (izindundana ze-gallbladder, 12 duodenal ulcer), futhi esigabeni 2B, ama-lymph node aseduze ayathinteka.
Izigaba ezintathu zomdlavuza we-pancreatic kuthiwa kungaba uma isimila sihlasele imithambo emikhulu nemithambo, ubonda, isisu, amathumbu. Ama-metastases kuma-lymph node avumelekile noma kungenzeka angabi.
Isigaba sesine somdlavuza singama-metastases akude. Ngomdlavuza we-pancreatic, zikhula esibindini, emaphashini, ebuchosheni, ezinsweni, emaqanda.
Izimpawu zokuqala zomdlavuza we-pancreatic, ukubonakaliswa
Ubuhlungu bunganikezwa emuva noma esiswini
Ukungabonakali komdlavuza we-pancreatic kuqukethe ukubonakaliswa okuhlukahlukene kanye nokungabikho kwesithombe somtholampilo ovelele. Umdlavuza ungaba nezimpawu ze-pancreatitis noma uzenze ushukela, futhi ukubonakaliswa kobuhlungu obuzwakala emuva emuva, ngomonakalo emuva kwesitho, iziguli zivame ukuthi zibangelwe yi-radiculitis.
Ngokuya ngokuthi yiziphi amaseli abhekane ne-oncotransformation, isithombe sezimpawu zokuqala zomdlavuza we-pancreatic nawo siyahluka. Nge-gastrinoma, ukukhiqizwa kwejusi lesisu kuyakhuphuka, ngokubhekisele emuva lapho kuvela khona isibungu senhliziyo, isilonda esingelashwa. Ukuhlanza okungu-brown nezitofu, ukuhanjiswa yisisu okunamafutha e-fetid, kubuhlungu ngemuva kokudla kuyaphawulwa.
IGlucagonoma ihlotshaniswa nokwanda koshukela wegazi futhi kuboniswa yizimpawu zesifo sikashukela:
i-polyuria (umthamo owengeziwe womchamo),
iziguli ziyafiphala futhi zikhukhumeze ulimi, kuqhume imichilo yoshizi onsundu.
Isimo somtholampilo se-insulinoma, kunalokho, sihlotshaniswa nokwehla koshukela wegazi futhi kubonakaliswa ngu:
ukufiphala, ukufeyila, noma ikhefana
Izimpawu zokuqala zomdlavuza we-pancreatic wokuqala zihambisana nokuncipha komthamo wokusebenza, ukukhathala, ubuthakathaka. Imvamisa iziguli ziphelelwa yinhliziyo noma zithande ukudla okuthile. Kuyakwazi ukukhombisa izinhlungu esiswini esingenhla, futhi kwesinye isikhathi maphakathi, kukhuliswe ngokugoba phambili nokuncika endaweni yesibungu.
Njengoba uthuthuka umdlavuza we-pancreatic, kubonakaliswa izimpawu eziningi ezihlobene nokukhiqizwa okulimazayo kwama-enzyme:
usizi "ngaphansi komgodi"
uhudo lwe-fetid olunamafutha,
ukuncipha ngenxa yokungakwazi ukumunca izingxenye zokudla,
i-anorexia (ukuntuleka kokudla)
ukungabekezeleli ukudla namaprotheni,
Uma i-bile duct icindezelwa yisimila, kuvela i-jaundice, ebonakaliswa ngokuphuzi kwe-sclera yamehlo, yesikhumba, nolwelwesi lwama-mucous. Izinduku ziyakhanya, nomchamo, kunalokho, kumnyama. Isigaxa senyongo sikhulisiwe, futhi amakristalu we-bile acids aqoqana esikhunjeni, abangele ukulunywa.
Ukucindezelwa yi-neoplasm of the spleen kubangela usizi nokuqhuma kwe-hypochondrium yangakwesobunxele. Ukukhula kwesimila odongeni lwamathumbu kuholela ekuqunjelweni nasekuvinjelweni.
Ezigabeni 3 no-4, izimpawu zomdlavuza we-pancreatic zibonakaliswa ngokuqongelela uketshezi emgodini wesisu (ascites). Ingozi yokopha kwangaphakathi, i- thrombophlebitis iyakhula. Isiguli sikhathele, sinobuhlungu obuvame ukuba yi-herpes zoster.
Ukuxilongwa ngemikhiqizo yokubola yesimila kuholela ekukhulekeni okuqhubekayo kokushisa komzimba.
Uma isimila singazange sithinte imithambo emikhulu nezitho eziningi, singanikanga ama-metastases akude, ukwelashwa okungcono kakhulu kuyahlinzwa. Njengoba umdlavuza we-pancreatic uthuthuka ngokushesha okukhulu, akufanele ukubambezele ukuhlinzwa. Ngokuya endaweni yesilonda, izinhlobo ezilandelayo zokwelashwa ziyahlukaniswa:
Ukusebenza kukaWhipple - ukususwa kwekhanda lendlala, ama-lymph node wesifunda, isigaxa senyongo kanye nomgodi wayo, ingxenye yesisu, amathumbu,
Ukuqalwa kabusha kwesitho esigcwele
Ukuhlukaniswa kabusha okuhlukaniswayo noma okuyingxenye - ukususwa komzimba nomsila noma ingxenye esemaphakathi kuphela, ngokulandelana.
Ngama-tumor angenakufinyeleleka esigaba 3 no-4, ukufakwa kwesisu kwe-bile duct kungenzeka uma i-neoplasm ivimba ukuphuma kwe-bile.
Ukucindezelwa komdlavuza wesisu namathumbu kuqedwa ngokuqunjelwa - lezi zitho ezimbili ziyahlanjululwa ukuze zidlule isimila.
Indlela yesimanjemanje ukwenza imisebenzi usebenzisa ummese we-gamma, okuvumela ukuthi uvuse kanyekanye izicubu zomzimba, ubulale amaseli abolile.
Ngaphezu kokwelashwa okuhlinzwa, ngomdlavuza we-pancreatic, i-radiation ne-chemotherapy asetshenziswa kabanzi. Lokhu kokugcina kungenziwa ngemithi eminingana noma nge-monotherapy eyodwa. Izidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu yilezi:
Ukwelashwa ngemisebe kukhonjiswa womabili ama-tumor angasebenzi, futhi kuhlangene nokwelashwa okuhlinzwa. Le ndlela isuselwa ekusetshenzisweni kwemisebe ye-ionizing, ebulala ikakhulukazi ukwahlukanisa amaseli we-neoplasm.
Ngaphezu kwalokho, eminyakeni yamuva nje, izindlela ezintsha zokwelapha umdlavuza ziye zenziwa ngenkuthalo futhi zacwaningwa: okubhekiswe kuzo kanye ne-immunotherapy. Ohlelweni lwamuva, kusetshenziswa izidakamizwa ezihlanganisa ezazo izivikelo ukulwa neoplasm. Ukwelapha okuqondiwe kukuvumela ukuthi ubulale amaseli avela kuphela ngokunembile. Ekwelashweni okunjalo, kusetshenziswa umuthi u-Erlotinib.
Ukubikezela - baphila kangakanani ngomdlavuza we-pancreatic
Umdlavuza wepancreatic unesifo esingesihle sempilo. Noma ukuhlinzwa kukaWhipple kwenziwa ngesikhathi, isilinganiso sokusinda seminyaka engu-5 asidluli kuma-25%, kepha ngezindlela ezihlukile ze-pathology, izinkomba ziyehluka kakhulu.
Ngakho-ke, iziguli ezinama-cell cell adenocarcinomas ziyafa kungakapheli nonyaka ukutholakala kwesimila, futhi nge-adenocarcinoma ye-mucidous, ama-50% eziguli akwazi ukuhlala iminyaka emi-5.
Ngokwezibalo, umdlavuza we-pancreatic uthatha izimpilo zabantu kungakapheli izinyanga ezi-6 ngemuva kokuxilongwa: isifo esine-metastases esibindini silinganisa lesi sifo isikhathi esingaphezu kwamaviki ayi-16, esinamaqhubu esibili sendawo ehlukile, lesi sikhathi singakhuphuka size sifinyelele ezinyangeni ezi-6 kuya kwezi-12.
Ngezigaba ezi-4 zesifo, yi-4% kuphela yeziguli ekwaziyo ukuhlala ngaphezulu konyaka. Kuyaziwa ukuthi uma izimpawu ezinamandla zokudakwa nobuhlungu, zizoba mfushane kakhulu impilo yesiguli.
URakhim, Khaitov Immunogenetics wohlobo 1 sikashukela mellitus / Khaitov Rakhim, Leonid Alekseev und Ivan Dedov. - M: I-LAP I-Lambert Academic Publishing, 2013 .-- 116 k.
Borisova, O.A. I-Mycosis yezinyawo ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-2 mellitus / O.A. Borisov. - M: Tome, 2016 .-- 832 k.
I-Tsarenko, S.V. Ukunakekelwa okujulile kwesifo sikashukela i-mellitus / S.V. Tsarenko. - M: Imithi, 2008 .-- 615 k.
UDolzhenkova N.A. Isifo sikashukela Incwadi yeziguli nabathandekayo babo. I-SPb., Ukushicilela indlu "Peter", amakhasi we-2000,151, ukusatshalaliswa kwamakhophi angama-25,000.
Izindleko zokuhlolwa kwezokwelashwa kanye nokwelashwa okuqhubekayo komdlavuza we-pancreatic enhlokodolobha yezwe nesifunda sayo kunqunywa ngamanani alandelayo:
Ukubonisana kwe-gastroenterologist ˗ 2000-2100 p.,
Ukubonisana kwe-oncologist ˗ 2500 p.,
Ukubonisana Chemotherapist ˗ 4800-5000 p.,
Ukubonisana nge-radiologist ˗ 4000 r.,
Ukubonisana kwe-Oncopsychologist ˗ 2500-2700 r.,
I-Ultrasound ПЖ ˗ 900-1000 p.,
I-MRI ˗ 6000 p.,
I-Coprogram ˗ 400-500 p.,
I-Oncomarker CA 19-9 ˗ 700-900 p.,
I-Ast, i-alt, i-bilirubin, i-Alfa-Amylase ˗ ngayinye yezinkomba imayelana ne-220-250 p.,
Diagnostic laparoscopy ˗ 34000 p.,
Ukubuyisela kabusha i-cholangiopancreatography ˗ 11000-12000 p.,
Ukuhlaziywa kokuqukethwe kwe-duodenal ˗ 450-650 p.,
I-punct biopsy yama-pancreas ˗ 9000-9500,
Ukubuyiselwa kwekhanda le-pancreatic ˗ 68000-70000 p.,
Ingqikithi ye-duodenopancreatectomy ˗ 96000-97000 p.,
Ingxenye eyodwa yamakhemikhali i-chemotherapy ˗ 7500 p.,
I-Polychemotherapy ˗ 10000-11000 r,
Ukwelashwa ngemisebe ˗ 3500 p.
Noma yisiphi isimila esidabukisayo siyindlela ebulalayo engabulala. Ngakho-ke, ungayinaki impilo yakho. Ukwenqaba imikhuba emibi, ukondleka okufanele nokuhlolwa okujwayelekile kwezokwelapha важные le yimithetho ebalulekile okumele ilandelwe yinoma ngubani ofuna impilo ende nokuthula.
Bafundi abathandekayo, umbono wakho ubaluleke kakhulu kithi - ngakho-ke, sizokujabulela ukubuyekeza umdlavuza wekhanda we-pancreatic kumazwana, lokhu kuzoba wusizo nakwabanye abasebenzisi bendawo.
Umdlavuza we-pancreatic ungenye yezinhlobo zomdlavuza onamandla kunayo yonke, futhi njengoba odokotela besitshele, i-prognosis iyona ebi kakhulu. Isinye isihlobo sami sisanda kutholwa sinesimila esinjalo, sinama-metastases asesemthanjeni kanye ethangeni linye. Akekho owaqala ukusosiqinisekisa, konke kucacile. Konke okunikezwayo yizifundo ze-˗ chemotherapy.
Yebo, kunzima kakhulu ukulwa ne-tumor pancreatic. Futhi akukho zokupheka zabantu Ngezwa abaningi beluleka amakhowe e-chaga. Hlobo luni lwamakhowe. Noma umuthi wanamuhla awunamandla.